ဆေးရုံလူပျိုနှင့်နှစ်ချက်ပွတ်ဆွဲကူးပြောင်းမှုတံခါး China Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါး > တံခါးဆွဲယူဆေးရုံ > ဆေးရုံလူပျိုနှင့်နှစ်ချက်ပွတ်ဆွဲကူးပြောင်းမှုတံခါး
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတံခါးကိုလျှောစီတံခါးကိုအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကဝိုင်းလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုအတွင်းစိတ်ဘောင်နှင့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုပျားလပို့ပြားနှင့်အတူစီတန်းတစ်ခုတည်းတပြင်လုံးကိုသံမဏိပန်းကန်, စုံလင်သောကုသမှုမွငျ့မားရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပိတျထားရှိပါတယ်, မှအရည်အသွေးမြင့် EPDM အထူးရော်ဘာတံဆိပ်ခတ်ထားမျက်နှာပြင်ပိတ်ထား စုံလင်သောချောမွေ့စွာတံဆိပျရှိစေသတည်း။ အရည်အသွေးမြင့်ရာသီဥတု-ခံနိုင်ရည်အရောင်စင်ကြယ်သော polyester electrostatic အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ Bao သံမဏိသံမဏိအားလုံးအရည်အသွေးမြင့်အအေးရှင်းပြီသံမဏိများတွင်အသုံးပြုဘုတ်အဖွဲ့, မျက်နှာပြင်, (ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများ QUALICOA D နဲ့အညီ) GB5237.4-2000 စံနှင့်အညီသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို , ထင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို။ တံခါးကိုစာနယ်ဇင်း (ဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေ X-Ray ထုတ်လွှတ်ကာကွယ်တားဆီးရေးကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်) နံရံအထူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသွင်မြင်လာအောင်, နံရံ 2mmpb ထူဆီသို့အကာအကွယ်ကြိုး, အခြား 2mmbp ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အထူ။ အဆိုပါဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးတံခါးကို sagging ရှောင်ရှားရန်သက်ရောက်မှု၏အချက်ပြောင်းလဲနေတဲ့သမရိုးကျပတ္တာကနေမတူညီတဲ့ဒီဇိုင်းထူးခြားတဲ့, အပေါ်တွင်မူတည်ပိုမိုတာရှည်ခံအကာအကွယ်တံခါးကိုအောင်, သင်ချောချောမွေ့မွေ့ဖွင့်လှစ်။
နည်းပညာခြုံငုံ High-ဖိအား, High-အစှမျးသတ်တိလူမီနီယံအလွိုင်းဘောင်, အလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားကြီးမားသောပလက်ဖောင်းဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်စက်ကိရိယာများနှင့်ပြည့်စုံ polyurethane မြှုပ်အတွင်း၌ 1. တံခါး panel က။ ကောင်းသောတံခါးကိုအရွက်မျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်သေချာစေရန် flat အထူးပစ္စည်းကိရိယာနှင့်နည်းပညာ: အမျိုးမျိုးသောစာရွက်ဆိုရင်တော့ Matte သံမဏိ, သံမဏိ, လူမီနီယံ, လျှပ်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုလေပေါ်မှာပ, PVC ပြား, တံခါးကိုပြားမှုန်ရေမွှားအရောင်အမျိုးမျိုးရွေးချယ်နိုင်သည်။
တံခါးဘောင်နှစ်ဖက်လုံး 2. ကျန်းမာရေးဆေးရုံအသုံးပြုမှုနှင့်အညီ embedded တံဆိပျ, ထိပ်နှင့်အလယ်တန်းလိုအပ်ချက်များကို
4. 304 သံမဏိဘောင်, အရည်အသွေးမြင့်တင်သွင်းသည့်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးတံဆိပ်ခတ်ထဲမှာ embedded တံခါးကိုဘောင်, အတွင်းပိုင်းတံခါးများအထူး polyurethane မြှုပ်ဆံပင်ဖြည့်ပါ။ လူပျိုတံခါးကိုနှစ်ချက်တံခါးကိုနှစ်ချက်တံခါး, စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
5. Applications ကို: ဆေးရုံများ Pom, ဓာတ်ခွဲခန်း။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအလင်း Beam ကိုပြောင်းလဲမည်:
ဒီအရာဟာလုံးဝဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့်အတူဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် ESC စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများအလိုအလျှောက်တံခါးများလိုအပ်အလုပ်ခွင်နှင့် ပတ်သက်. ပြင်သစ်အစိုးရနှင့်အညီအညီ။
အလိုအလျောက်ဆေးရုံတံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆွဲယူ ဆေးရုံနှစ်ချက်တံခါးဆွဲယူ အလိုအလျောက်လေဆိပ်တံခါး အလိုအလျောက်သတ္တုတံခါး အလိုအလျောက်စက်ရုံတံခါး Shutter အလိုအလျောက်ဆေးရုံလျှောတံခါး အလိုအလျောက်မြန်တံခါး